InMotionNowuputara Oge Ngosiputa oru Ntaneti nke Emails | Martech Zone
InMotionNowuputara Oge Ngosiputa oru Ntaneti nke Emails
inMotionNow, onye na - eweta ihe njikwa arụ ọrụ maka ahịa na ndị otu okike, gosipụtara mmelite kachasị ọhụrụ na ngwaahịa ya, inMotion, gụnyere nke ọhụrụ nyochaa atụmatụ maka ozi ịre ahịa na ọgbọ na-esote UX / UI.
Ihe nyocha nke email ahụ na-enyere ndị ọrụ aka ịhazi ozi ịntanetị site na ikpo okwu ahịa email ha ahọrọ ozugbo na InMotion maka nyocha na nkwenye. Ndi ahia na ndi otu okike adighizi arapara n’inye na inata nzaghachi na mgbasa ozi email kariri ozi email. Kama, ha nwere ike iji nyocha nke InMotion, mmekorita, yana atụmatụ ihu ọma ka akara akara email dị ka ha ga-egosi.
Isi ihe dị na ntanetị Nyocha Online:
Nyocha ngwa ngwa: Ndị ọrụ nwere ike izipu ozi ịntanetị ozugbo site na ikpo okwu ahịa email ha na InMotion, ebe a na-agbakwunye ozi email ahụ na ozi mkpọsa ma gosipụta ya n'ọnọdụ dị ka ihe akaebe ga-aga maka nyocha na nnabata.
Okwu Pụrụ Iche: Na mgbakwunye na ibipụta ọdịnaya nke email ahụ na gburugburu nyochaa n'ịntanetị, inMotion na-enyekwa ndị nyocha ihe ọmụma dị mkpa maka email ọ bụla, dị ka akara isiokwu, ụbọchị izipu, na ndị na-ege ntị lekwasịrị anya, nke ha nwere ike itinye akara ma ọ bụ kwado.
Nzaghachi doro anya: Iji inMotion maka nnabata email pụtara na ndị nyocha ga-ezere mgba nke ịkọwa nzaghachi ha na email nnwale natara na igbe nnabata ha, kama iji ngwa nyocha dị mfe ma kensinammuo na gburugburu ebe nyocha na ntanetị iji mee ka ọ dị mfe ọgụgụ na akara-akara.
Na-aga na Nkwado: Site na ngwa inMotion si na ekwentị, ndị ọrụ nwere ike kwado ngwa ngwa email na ebe ọ bụla ha na-eji 'mkpịsị aka aka' ma ọ bụ 'isi mkpịsị aka' dị mfe.
Na mgbakwunye na nyocha email, inMotionNow nwere ụdị ọhụụ na mmetụta dị n'ime InMotion. N'ịbụ nke ụkpụrụ ụkpụrụ ihe ama ama ama ama, agbadoro UX / UI na-esote ọgbọ maka azụmaahịa na ndị otu okike iji mee ka ọ dị mma ma kwado nzukọ niile. Emebere ahụmịhe ọrụ nke onye ọrụ maka ndị ọrụ nke ikike teknụzụ niile, na-enye ohere dị mfe na njirimara.
Anyị etinyego ego oge niile na mmepe ngwaahịa na-aga n'ihu iji kwado ọnọdụ onye ndu ahịa n'ime oghere njikwa ihe okike. Mmelite ndị a kachasị ọhụrụ na-aga n'ihu na simenti dị ka ihe nrụpụta arụmọrụ kacha mma nke ụlọ ọrụ ahụ. inMotionNow CEO Ben Hartmere.
N'iji ihe ndi emejuputara na-eweputa arịrịọ n'ime oru, oru ngo n'ime ihe akaebe, na ihe akaebe n'ime nnwaputa ikpeazu, inMotion na-ezere ihe mgbagwoju anya nke ihe eji eme ihe oru ngo, kama itinye uche na ahia na ndi oru okike kwesiri idobe ọdịnaya na-aga n'ihu.
Banyere inMotionNow, Inc.
inMotionNow bụ onye na - eweta ụzọ esi arụ ọrụ arụmọrụ maka ahịa na otu ndị na - emepụta ihe, na - enyere aka ịrụ ọrụ na nrụpụta site na kickoff ngo ruo nkwenye ikpeazụ. inMotion, ngwa ahịa SaaS nke ụlọ ọrụ ahụ, na-eme ka usoro ọ bụla nke usoro okike okike na-eme ka ọ dị mfe, na-enye ndị ahịa ụlọ ọrụ uru zuru ụwa ọnụ. Ngwa a na enye ndi oru ngo ohere ijikwa, uzo, na mmekorita ha na oru nyocha ha na vidio ha, vidio ha na ahia ahia ha na gburugburu intaneti. Site na interface enyi na enyi na ndị otu na-azụ ahịa nke ọma, inMotionNow na-enyere ndị okike na ndị na-ere ahịa ụdị dị iche iche aka ọrụ ha hụrụ n'anya ma mepụta ndị ọzọ.
Tags: nkwenyeemail nkwadoemail mmekotaemail usoroemail nyochaa ikpo okwuinmotionamaghị nke ọmanhazi usoro
Kedu Teknụzụ Kpochapụrụ na Smartphones?